Ciidamo Gadoodsan oo xirtay Waddooyin aan ka fogeyn Madaxtooyada Soomaaliya | XORRIYA NEWS
Home Wararka Ciidamo Gadoodsan oo xirtay Waddooyin aan ka fogeyn Madaxtooyada Soomaaliya
Ciidamo Gadoodsan oo xirtay Waddooyin aan ka fogeyn Madaxtooyada Soomaaliya
Ciidamo ka tirsan kuwa Milateriga dowladda Federaalka Soomaaliya oo ayaa xirtay Waddooyin ku dhow Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan Taalada Daljirka Daahsoon iyo ilaa agagaarka Guriga wasaaradda amniga.
Saraakiil u hadashay Ciidankaan gadoodka sameeyay ayaa sheegay Xinay mushaar la’aan yihiin muddo 1 sano iyo 9 Bilood ah.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qeybta 27-aad ee Gobolka Hiiraan oo warbaahinta kula hadlay Daljirka Daahsoon ayaa waxaa ay u sheegeen inay mushaar la’aan yihiin muddo sanad iyo 9 Bilood ah.
Madaxda Federaalka Soomaaliya ayay ku eedeeyeenSaraakiisha Ciidanka in aysan siin Mushaaraadkooda, xili ay tilmaameen in Madaxda ay sheegayaan in Ciidanka la siiyo Mushaaraadka.
Hadlkan kasoo saaray Saraakiisha Ciidanka ee cabanaya ayaa waxaa uu kusoo aadayaa, iyadoo dhawaan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay ee hadal ahaa in Ciidanka Xoogga ay si joogta ah mushaarka loo siiyo.